Doon u rarneyd ganacsato Somali ah oo ku degtay Xeebaha Boosaaso – STAR FM SOMALIA
Doon u rarneyd ganacsato Somali ah oo ku degtay Xeebaha Boosaaso
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku degtay dooni Ganacsi oo u rarneyd ganacsato Somaliyed.
Doonida ku Degtay Xeebaha Magaalada Boosaaso ayaa lagu Magaacaabi jiray Alkhaadiri waxaana ay ka timid Dalka Cumaan iyadoo Shixnad Ganacsi u siday ganacsato Somaliyed.
Doonta ayaa la sheegay inay ku degtay meel 14-Mile u jirta Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Maamulka Puntland.
Waxaa la socday doontaan 12 qof oo kala ahaa 10 ruux oo Hindi ah iyo labo ruux oo Somali ah, waxaa laga soo badbaadiyay doontaasi 5 ruux oo mid ka mid ah uu yahay Somali.
Mukhtaar Shaqle oo ah Wakiilka doonta degtay ayaa u sheegay VOA in aanan nolol iyo geeri lagu haynin dadkii kale ee doonta saarnaa, kuwaasi oo u badnaa Ajaanib u dhalatay dalka India.
Ciidanka Badda Maamulka Puntland ayaa ku guda jira Baadigoobka meydadka dadkii kale ee doonta saarnaa ee biyaha ku geeriyooday.
Agaasimaha Madaxtooyada Puntland oo lagu dilay magaalada Boosaaso